Wasiir Juxa, ku xigeenadiisa iyo RW Khayre oo kulmey, Agasimhii oo aqbaley xill ka qaadistii
MUQDISHU, Somalia- Kulan maanta isugu yimadeen Ra'isal wasaraha Somalia, Wasiirka arimaha dibada iyo ku xigeenadiisa ayaa ku soo dhamaadey is-afgarad iyadoo Wararka GO soo gaaraya sheegayaan in mas'uuliyinta wasaarada balan qaadeen in arimahii jirey maalmihii ugu dambeeyey lagu dhameeyo wadahadal.
Kulankaan ayaa yimid maalmo kadib markii khilaaf dibada u soo baxay uu sababey in qoraal ay soo saareen Wasiir ku xigeenka iyo wasiiru dowlaha kaa soo ay ka hor-imaanyeen go'aan wasiirka wasrada shaqada kaga fariisanayo Agaasimaha wasaarada.
Agaasimahii hore ee wasaarada arimaha gudaha ayaa aqbaley go'aankii Wasiirka shaqada kaga fariisinayey kadib markii cadaadis kaga yimid xildhibaano beeshiisa ah iyo siyaasiyiin kale.
Dhinaca kale Wasiirka arimaha gudaha Puntland Cabdi Farax Siciid ayaa hor-tagey maanta guddiga joogtada ah ee Barlamanka Federalka Somalia u qaabilsan arimaha gudaha kuwasoo wax ka waydiiyey arimo ku saabsan shaqooyinka wasaarada.
Wasiirka arimaha gudaha Somalia ayaa waxaa la rumeysan yahay tan iyo intii uu xilkaan qabtey in culeysyo siyasadeed ka haystaan fakarkiisa ku aadan arimaha Federalka dalka Somalia.
Mudaharaad lagu diidan yahay lacagta Faalsada ah oo ka dhacey Buhoodle
Puntland 23.08.2017. 10:05
BUHOODLE- Magalaada Buuhoodle gobolka Cayn ayaa caro ka dhalatay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga ah waxay sababtay in dhallinyaro u badan muruq maal ay gebi ahaan xidhaan goobaha ganacsiga iyo wadooyinka.
Ganacsatada ayaa hore kala sooc ug ...
Banaanbax ka dhacey magaalo madaxda Puntland ee Garowe
Puntland 04.08.2017. 13:14